Wakiilka Mohamed Salah oo soo gaaray Ingiriiska… (Miyuu wada-xaajoodka heshiis kordhinta laacibka reer Masar la billaabi rabaa Liverpool?) – Gool FM
Ahmed Nur October 17, 2021
(England) 17 Okt 2021. Wakiilka Mohamed Salah ee Ramy Abbas Issa ayaa shalay usoo duulay dalka England si uu u daawado ciyaartii ay Liverpool xasuuqday Watford markaas oo ay 5-0 ku xaaqday dhiggeeda kulan ciyaareed ka tirsan horyaalka Premier League.
Salah ayaa ayaa bandhig heer sare ah ka sameeyay kulankaas isagoo dhaliyay goolkiisii 10-aad ee xilli ciyaareedkan, waxayna wararku sheegayaan kaddib bandhiggaas wacan, in wakiilka reer Colombia uu wada-xaajood heshiis kordhin ah la gelayo Reds si uu xiddiga uu wakiilka u yahay ugu soo gacan geliyo qandaraas uu toddobaadkii ku qaadan doono 500 kun oo gini asbuucii.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa akhbaarta wada-xaajoodka daaha ka rogay wargeyska The Mirror ee kasoo baxa Ingiriiska xilli uu laacibka Masaarida ah haatan kula jiro Liverpool qandaraas dhici doona 2023 isla markaana uu ku qaato 200 kun oo gini.
29-sano jirka weerarka ka ciyaara ayaa door muhiim ah ka qaadanaya shaxda Jurgen Klopp isagoo shalay barbarreeyay rikoorkii Didier Drogba ee ah Afrikaanka ugu goolasha badan Premier League.
Horudhac: Barcelona vs Valencia... (Shaqada Ronald Koeman oo miiska saaran & Sergio Aguero oo...)